Fizahan-tany Seychelles sy Qatar Airways mizara fivoarana vaovao amin'ny Swiss Media
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Fizahan-tany Seychelles sy Qatar Airways mizara fivoarana vaovao amin'ny Swiss Media
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Vaovao farany momba ny Qatar • fanorenana • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Seychelles fizahan-tany sy Qatar Airways
Ny fizahan-tany Seychelles sy ny mpiara-miombon'antoka Qatar Airways dia nanamafy ny fiezahana hanamafisana ny fahitana ny toerana haleha any Suisse amin'ny alàlan'ny fikarakarana fihaonana amin'ireo mpitsangatsangana, haino aman-jery ary matihanina amin'ny indostria any Zurich ny alakamisy 23 septambra lasa teo.
Hetsika roa mikendry ny hitazomana ny mpiara-miombon'antoka amin'ireo fivoarana any Seychelles.
Ny lohahevitra dia misy ny fepetra fiarovana, fisarihana vaovao, ary koa ny vaovao farany avy amin'ny Qatar Airways ary ny fandaharam-potoanan'ny sidina mankany Seychelles.
Ny fivoriana dia nanamafy ny fisian'ny firenena eny an-tsena ary nanome toky ireo mpiara-miombon'antoka fa misy ny fifandraisana amin'ny nosy keliny.
Ny hetsika manokana natao tao amin'ny Savoy Baur en Ville any Zurich, dia nanasongadina ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nandritra ny sakafo maraina, ary ny fivoriana fisakafoanana nahasarika mpiara-miasa media 12 sy mpitantana vokatra 15.
Notarihin-dRamatoa Bernadette Willemin, Tale Jeneralin'ny Marketing ho an'ny Seychelles fizahan-tany, sy Andriamatoa Antonio Panariello, Mpitantana Varotra Suisse ao amin'ny Qatar Airways, ireo hetsika roa ireo dia natao hitazomana ny mpiara-miasa aminy hanana fivoarana any Seychelles, fepetra fiarovana, fisarihana vaovao, ary koa ny vaovao farany avy amin'ny Qatar Airways sy ny fandaharam-potoanan'ny sidina mankany Seychelles.
Niresaka avy tany Zurich, Ramatoa Willemin dia nanamafy fa ny fizahan-tany Seychelles dia miomana amin'ny dingana manaraka ho an'ny fanarenana ho any amin'ny toerana haleha, izay ny faran'ny herinandro lasa teo dia nandrakitra ny mpitsidika azy 100,000 XNUMX mandritra ny taona.
“Rehefa miverina miadana amin'ny laoniny ny fiainana dia mirongatra ny vaksiny any Eropa ary manamaivana ny fivezivezena sy ny fivezivezena manerantany. Manohy ny asany ny seranam-piaramanidina ary miaraka amin'ny mponin'i Seychelles manokana mankafy ny iray amin'ireo taha ambony indrindra amin'ny vaksiny eran'izao tontolo izao, ny Tour Seychelles koa dia afaka mamerina ireo hetsika fampiroboroboana ao amin'ny kalandrieny. Hetsika marobe no miseho amin'ny tsenantsika rehetra. Ny hetsika anio any Suisse, izay niara-niasa tamin'ny Qatar Airways, dia ny hanamafisana ny fisianay eny an-tsena ary hanome toky ireo mpiara-miasa aminay fa misy ny fifandraisana amin'ny nosy kelinay, ”hoy Ramatoa Willemin.
Antonio Panariello, talen'ny varotra Soisa any Qatar Airways dia nilaza hoe: “Fahafinaretana lehibe ny tonga eto androany ary nampiantrano ity hetsika ity miaraka amin'ny Seychelles momba ny fizahantany. Ny fifandraisana misy eo amin'ny Qatar Airways sy Seychelles dia matanjaka sy manan-danja. Ity toerana ity dia mahaliana ny tsenan'i Soisa, ary reharehanay fa afaka mampiroborobo an'io toerana io izahay miaraka amin'ny fizahan-tany Seychelles. ”
Amin'ny fanamarihana tsara, ny haino aman-jery sy ny mpiara-miasa nanatrika ireo hetsika roa ireo dia nidera ny governemanta Seychelles sy ny indostria tamin'ny ankapobeny noho ny tsy fitovizany sy ny fahaizan'izy ireo mahay miresaka mandritra ny areti-mandringana.
Ny hetsika dia taorian'ny fitsangatsanganana an-gazety vao haingana tany Seychelles notohanan'ny biraon'ny Qatar Airways Switzerland ary notohanan'ny mpiara-miasa amin'ny hotely Constance Lemuria Resort, STORY Seychelles, Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa ary Kempinski Seychelles Resort.
Seychelles dia nahavita ny fanokafana indray ny sisintaniny amin'ireo mpitsidika vahiny ny 25 martsa 2021. Switzerland dia nanomboka tamin'ity taona ity dia nandray anjara tamin'ny tsena 3% amin'ny fahatongavan'ireo mpitsidika.